Blog Blog oo ah "Hindi ah" Tagged "Trend" - THE INDIAN FACE
TOP 5 hadiyado oo loogu talagalay maalinta aabbaha Casriga moodada casriga ah ee qaabka!
Wali ma ka fekereyso waxa la siinayo aabbaha Maalinta Aabbaha? Waa waqtigii lagu sharadayn lahaa wax ka duwan asalka. Maalinta aabbahaan, inKu dar taabashadaas gaarka ah hadiyadahaaga oo tus isboortigaaga iyo aabbahaa jecel-jacaylka dhammaan qaddarinta uu mudan yahay. Waxaan kaa caawineynaa 5 hadiyado ugu fiican oo la bixiyo Maalinta Aabbaha.
XALAY! Soo ogow sida laysku daro muraayaddaada muraayadaha cagaaran ikhtiyaar layaableh!
Cagaar ayaa ku jira! Had iyo jeer waa wakhti fiican in la xidho muraayadaha indhaha. Midabka cagaaran, ee gudbiya dabiicadda, xorriyadda iyo firfircoonida, waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan! Gudaha The Indian Face Waxaan rabnaa inaan kuu sheegno sida laysugu daro muraayaddaada muraayadaha cagaaran iyo sababta ay u yihiin ikhtiyaarka ugu fiican haddii aad rabto inaad ku sharraxdo midabada dhalaalaya!
Muraayadaha qoraxda polarUnisex ayaa kor u ah Isaga iyo iyada!
Muraayadaha muraayadaha indhaha waa wax isaga iyo iyadaba si wanaagsan ugu muuqda. Looma baahna mar dambe xilligan in lagu celiyo in ay aad uga badan yihiin moodada moodada, laakiin in ay naga caawinayaan sidii aan u ilaalin lahayn indhaheenna. Tan iyo markii The Indian Face waxaan rabnaa inaan kuu sheegno maxaad u dooraneysaa muraayadaha indhaha polarla saaray waa muhiim!
Muraayadaha ugu quruxda badan iyo kuwa xamuulka qaada sannadka 2020!
Waxaan ognahay in sanadkaan 2020 uu ahaa mid aan caadi aheyn. Si kastaba ha noqotee, tan iyo The Indian Face, Ma dooneyno in nalaga daayo inta xun. Sanadkan 2020 sidoo kale wuxuu ahaa sanad khataro la galiyay, oo lagu farxay waxyaalaha yar yar.Waxaan rabnaa inaan sii wadno ku siinta waxyaabaha ugu tayada fiican ee aad rabto inaad ku sharaddo! Sababtan awgeed: waa kuwan alaabteenna xiddig ee sannadkaan 2020!
Boqorradii ayaa imanaya! TOP 5 xulashooyinka siinta 2021 kan
BOQORTOOYADA AYAA SOO SOCDA! Halkan waxaan kuugu keenaynaa xalka si aad u muujiso hadiyadahaaga oo aad ugu dabaaldegno Boqortooyada si buuxda. Iska hubi xulashooyinka hadiyadeed ee TOP 5 ee aan waligood dhicin oo taasi hubaal ka dhigi doonta qof gaar ah inuu ku farxo!
Muraayadaha muraayadaha indhaha oo moodada ahaan doona 2021!
Isbeddellada moodada indhaha ee 2021 waa ka qabow sidii hore, laga bilaabo midabada miyir-beelka illaa kuwa dhalaalaya illaa qiyaaso xad-dhaaf ah. Kuwaani waa isbeddellada 2021 ee muraayadaha indhaha ee ay tahay inaad ogaato!
Moodada loogu talagalay Ruuxyada Hindida ah Daboolkaaga xamuulka ayaa kuu hadlaya adiga!
Daboolkaagu wuxuu kuu qeexayaa sida aad tahay iyo dabeecadda aad gudaha ku sidato. Tani waa mood, kani waa The Indian Face® ku dhiirrigelisay isboortiga noo aqoonsanaya astaan ​​iyo falsafad ahaan. HWaxaan u dhalanay inaan ku jimicino isboorti kasta oo naga dhigeysa inaan dareemo nolol badan, jawi fiican. Haddii wax ka fiican yihiin nolosha, waxay awood u leedahay inay ku noolaato shucuur, qiiro iyo xoog.
Kulamadii aan la yeelanay Raayadaha Hindiga ah toddobaad kasta!
Shaqaalaheena Hindida ah ayaa sii kordhaya mana ogtahay waxa ugu fiican? Waxaan sidoo kale dooneynaa inaan kugu kalsoonaano! Haddii isboortiga, xorriyadda, rabitaanka raaxeysiga iyo xiisaha ay qayb ka yihiin maalintaada maalin, ha ka baqin inaad nala soo xiriirto oo aad ka mid noqotid kooxdan weyn ee loo diyaariyey wax kasta oo wanaagsan oo xiiso leh oo soo socda.
Muraayadaha barafka 2020 Cusbooneysii maaskaarkaaga xilligan barafka!
Suuragal ma ahan in lagu boodboodo ama lagu sabuuro barafka iyadoo aan la taaban "sixir" taas muraayadaha barafka waxay siiyaan fuula. Taasi xilliga barafka 2020 ha ku qabanin ilaaliyaha! Waxaa jira sababo badan oo ah inaan marwalba xirno muraayadaha indhaha barafka iyadoo aan loo eegin waqtiga sanadka. Akhriso oo ogow sababta muraayadaha barafka waa a waa in!
Soo ogow isbeddellada ku dhaca Muraayadaha Muraayadaha 2020!
Qaar fiican gafas de sol Hadday taasi tahayisbadal ayuu sameyn karaa ... Sannadkanna gafas de sol iyagu waa ka mood badan yihiin sidii hore! Naga ilaali shucaaca qoraxda oo hooseeya oo naga dhigo mid layaableh markaad muujineyso qaabkeena iyo shakhsiyadeena.Miyaad horeba u ogtahay muraayadaha indhaha la doorto sanadkaan? DBaro isbeddellada ugu kulul ee moodada, qaabka iyo caafimaadka indhaha muraayadaha indhaha 2020!
Koofiyad Gawaarida Xamuulka Trucker Koofiyad Maxay caan ku tahay?
ka Koofiyadaha xamuulka o Koofiyadaha Trucker Waxay caan noqdeen sanadihii la soo dhaafay waxaanan ku sii arkeynaa had iyo jeer joogitaanka ciyaartoyda, tacabiirayaasha iyo xitaa dadka caanka ah ee adduunka oo idil. Laakiin ma caawin karno laakiin waxaan la yaabanahay waxa ka dhigaya daboolka baabuur xamuul caan ah? Raaxadaada iyo raaxadaada? Noocyadeeda kala duwan iyo qaabkeeda gaarka ah? Soo ogow 5ta sababood ee sameeya daboolka xamuulka sidaa uga duwan kuwa kale!
Koofiyad shaqsiyeed Muuji qaabkaaga iyo shakhsiyaddaada!
Ma jiraan wax ka fiican inaad naftaada ka ilaaliso qorraxda qaabka ugu fiican! Xusuusnow in a daboolka caadada waxaa lagu gaaraa iskudhafka saxda ah ee utility iyo shaqsiyan. Akhriso oo soo ogow sababta koofiyaduhu u matalaan cayaaraha dhabta ah ee aad tahay, oo ka tarjumaya dhammaan xiisahaaga iyo shakhsiyaddaada.
Taasi waa sida wanaagsan ee gabadha koofiyadu u egtahay! Ogow isbeddellada ugu moodada badan 2020
Gabdhaha haysta koofiyadaha ayaa ka dhigaya mid weyn internetka! Ma maqashay wax ku saabsan gabdhaha caanka ah ee 'qurxinta'? Akhriso oo ka ogow waxyaabo badan oo ku saabsan isbeddellada moodooyinka internetka ee sannadka 2020
Waxaan soo uruurinay qaar ka mid ah koofiyadaha ugu caansan Hollywood Ma awoodaa inaad aqoonsato iyaga? Nagala soo dhawaaw xilliyadii ugu fiicnaa ee shineemo halkaasoo protagonists-ka dhabta ahi ay ahaayeen koofiyadaha!
Kubadda Koleyga: Sideed uga soo kacday dharka isboortiga oo aad fure u tahay dhaqanka magaalada?
Waxaan fursad u siineynaa sheekada weyn ee ka dambeysa daboolka baseball, oo sidoo kale loo yaqaanno "baseball cap" ama kaliya "baseball cap", qalab dheeri ah oo noqday nooc isboorti oo caan ah, laakiin sidoo kale maqaal dhar ah oo wali aad u xaadir ah. maalmahan.
Koofiyadaha xamuulka Xilliga xagaaga moodada moodada
Ereyga "xamuul xamuul" dabool ama "xamuul xamuul" cap si weyn ayaa looga dooday oo loo baahin doonaa taariikhda oo dhan. The xamuul xamuul Iyagu waa dhar loogu talagalay in madaxa iyo indhaha laga ilaaliyo shucaaca qorraxda, laakiin sannadihii la soo dhaafay waxay noqotey astaamo maaliyadeed oo summad leh.
Muraayadaha dumarka muraayadaha indhaha: Qalabka ugu waxtarka iyo moodada!
Hadda waxaad ka fikiri kartaa wax yar oo dheeraad ah oo ku saabsan ballaarinta buugga naag muraayadaha indhaha ah, kuwa aad aad u jeceshahay oo kaa dhigaya inaad u muuqato wax cajiib ah wajiyadaada oo dhan, inta ugu badan fashionista xitaa kuwa ugu isboortiga badan.
Qalabka ku habboon ee loogu talagalay cayaaraha xiisaha leh xagaaga Koofiyad cad waxay u muuqan kartaa shey aad u fudud marka jaleecada hore. Laakiin runtu waxay tahay inay tahay mid ka mid ah waxyaabaha ugu habboon ee la xiro xagaaga iyo in ka badan haddii aad u baxdo inaad ku tababbarto isboortiga xiisaha leh ee aad dooratay.
8D MUSIC: Waa maxay muusigga 8D maxaadse u bilaabeysaa inaad dhageysato?
Haddii aadan wali ka maqal muusikada 8D ama muusikada 8-geesoodka ah boostadani waxay kaa dhigeysaa inaad ka baxdo. Waa nooc ka mid ah muusikada loo qaabeeyey wax ka beddelka tikniyoolajiyada in runtu ay tahay inay tahay mid aad u qabow waxayna kaa dhigeysaa inaad dareento waxyaabo aadan waligaa ka dareemin heesaha caadiga ah.
Koofiyadaha dumarka Baro sida loogu daro koofiyadahaaga!
Dumar badan ayaa u maleynaya in koofiyadaha ay ku kooban yihiin ragga iyo ciyaartooyda ... Khalad! Xaqiiqdu waxay tahay in koofiyaduhu ay yihiin qalab wax ku ool ah oo aad u qurux badan oo haween kasta ay tahay inay ku biirto labbiska, gaar ahaan hadda sanadka 2020 oo isbaddalada isboortiga ay muddo dheer qaadanayaan.
Dabacsanaanta koofiyadaha ayaa sameyn doona wax kasta ciyaaraha ama dharka ayaa si gaar ah u taagan haddii aad sida saxda ah u sameyso. Marka waxaa la joogaa waqtigii si sax ah loo isugu dari lahaa koofiyadahaaga dumarka! Yaan lagaa tegin qaabka ugu dambeeya ee moodada adoo adeegsanaya qalabkan aan qaab dhismeedka ka baxayn.
Muraayadaha muraayadaha indhaha: Muraayadaha oo keliya kuma filna
Maalmaha qoraxdu shaki la'aan waa kuwa ugu fiican. Waxay la mid yihiin xeebta, barkadda dabaasha, fuulista, raacitaanka baaskiilka, buuraha, isboortiga iyo waxyaabo kale oo badan ... Maalmaha qorraxdu waxay la mid yihiin tacaburka! Laakiin runtu waxay tahay in cimiladu aysan isku mid ahayn maalin kasta oo aan mar walba loo baahnayn in lagu tiirsanaado maalmaha qoraxdu jirto si loo raaxaysto.
Kaliya fiiri barnaamijyada kaladuwan ee Cimilada ee mobilkaaga si aad u ogaato inay jiraan maalmo si dhakhso leh uga socda qorraxda iyo daruuraha. Laakiin waxaa muhiim ah in la xusuusnaado in labada maalmood ee daruuraha iyo qoraxdu ay muhiim tahay in la isticmaalo gafas de sol si aad indhahaaga u ilaaliso si sax ah oo aad u gaarto aragtida muuqaalka ee lagama maarmaanka ah.
La bixida muraayadaha indhaha | Waa inaad taqaanaa sida wanaagsan ee loo doorto
Muraayadaha muraayadaha qoraxda ayaa laga yaabaa inay yihiin waxyaabaha ugu wanaagsan ee ninku abuuray taariikhda oo dhan. Marka hore ilaalinta lagama maarmaanka ah waxay indhahayaga siiyaan ka dibna taabashadaas moodada ah oo shaki la’aan shaki geliya inay kujirto kooxdeena.
Eeyo leh muraayadaha qorraxda
Waxaa laga yaabaa 04, 2020
Nuqullada muraayadaha muraayadaha indhaha - ama miyaanay wadan karin muraayadaha muraayadaha indhaha? Eeydu waxay xiran karaan muraayadaha indhaha, loorsiga iyo wax alla wixii ay doonaan, waxbadan ayaa ka maqnaan doona !!
Bisadaha leh quraaradaha
Had iyo jeer waa wax xiiso leh in xayawaan rabaayad lagu arko muraayadaha muraayadaha indhaha oo la daawado bisadaha leh muraayadaha indhahaKama yaraan karto. Markasta ma noqonayso Puss ee Bootska, waxay sidoo kale noqon kartaa Puss-ka Glasses-ka. Ugudambeyn, taabashada xubinta taranka marwalba way ka farxisaa, mise waa taas muraayadaha indhaha indhaha?